Shahaadada Bajlarka ee ugu raqiisan Online Ardayda Caalamiga ah iyo kuwa Guriga 2022
Shahaadada Bachelor-ka Khadka Tooska ah ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah iyo Kuwa Gudaha
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shahaadada bachelor-ka internetka ee ugu raqiisan ee ay heli karaan labadaba ardayda raba inay wax ku bartaan dibadda iyo kuwa wax ku baranaya dalkooda.
Darajada Bachelor waa shahaado aasaasi ah oo qof kastaa doonayo inuu kasbado maadaama ay u taagan tahay aasaas aasaasi ah inaad soo qaadatay waxbarasho jaamacadeed sidoo kalena ay shardi u tahay sii wadidda aqoontaada, xitaa inaad hesho shahaadada barashada.
Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan helitaanka shahaadada bachelorka ee khadka tooska ah waa inay kuu oggolaato inaad ku raaxeysato raaxada waddankaaga inta aad shahaadada ka baranayso dal shisheeye. Sidan ayaad xitaa ku kasban kartaa laba darajo oo khadka tooska ah ah.
Caqabada ugu weyn ee helitaanka shahaadooyinka caalamiga ah khadka tooska ah waa khidmad, khidmadaha marwalba waa cabsi laakiin macluumaadka saxda ah waxaad ku dagi kartaa jaamacado sumcad ku leh dibadda oo madaxaaga ka goyn doonin ka hor inta aan shahaadada lagugu siin internetka.
Jaamacadahan inkasta oo khidmooyinkooda hooseeya wali laga aqoonsan yahay adduunka oo barnaamijyadooda shahaadada ay ku kala baahsan yihiin dhowr farsamooyin.
Halkan, waxaan diiradda saari doonaa barnaamijyada shahaadada internetka oo ka mid ah kuwa ugu jaban barnaamijyada shahaadada aad ka heli karto adduunka.
Qiimeynteyda barnaamijyada shahaadada jaamacadeed ee ugu hooseeya waxay ku saleysnaan doontaa qaddarka khidmadda waxbarashada ee jaamacadda bixisa kharashka barnaamijka saacaddii amaahda.
Waxbarista halkii deyn barnaamijyadan onlie-ka ah ayaa ah waxa go'aamin doona qadarka uu shaqsi ku bixinayo inuu ku helo shahaadada shahaadada.
Waxaan diirada saari doonaa shanta barnaamij ee shahaadada koowaad ee bachelor-ka ee ah in la yiraahdo, 5-ta ugu sareysa barnaamijyada shahaadada khadka tooska ah ee internetka iyo kuwa kale.
Shahaadada Bachelor-ka Khadka Internetka ee ugu jaban
(1). Ku Jaamacadda Cumberlands Bixinta barnaamijyo shahaadada internetka ah oo raqiis ah dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin tikniyoolajiyadda, barashada diinta, ganacsiga, iyo waxbarashada, oo laga qaado a waxbarashada saacaddii amaahda ee $ 199. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu jaban adduunka oo dhan ardayguna uma baahna inuu booqdo dugsiga sabab kasta ha ahaatee ka hor inta uusan helin shahaadadiisa ama shahaadadeeda.
(2). Ku Kulliyadda Xeebta Georgia Bixinta barnaamijyo shahaadada internetka ah oo la awoodi karo oo ku saabsan maareynta shaqaalaha iyo hoggaaminta, luqadda Faransiiska iyo suugaanta, iyo maareynta aan faa'iido doonka ahayn iyo ku dallacaya kharashka saacaddii amaahda oo kaliya $ 136.
(3). Ku Jaamacadda Dooxada Magaalada - Edwardsville Bixinta shahaadada bachelor-ka ee internetka ee jaban ee muusikada, waxbarashada tikniyoolajiyadda, maareynta isdhexgalka ganacsiga, iyo sayniska bulshada oo leh Lacagta Saacadda ee Lacagta ee $ 177. Qaar ka mid ah barnaamijyadu waxay u baahan karaan ardayda inay booqdaan dugsiga marmar laakiin maahan inay ku guuleystaan.
(4). Ku Jaamacadda Koonfurta Georgia waa mid ka mid ah shahaadada jaamacadeed ee ugu jaban ee bixiya iskuulada adduunka. Khidmadaha shahaadada internetka ee kharashka yar ee koorsooyinka sida kalkaalinta caafimaad waxay kasbadeen aqoonsi sare.
In kasta oo kuwa bixiya barnaamijyada kalkaalinta caafimaad ay mararka qaarkood u baahan yihiin inay qaataan fadhiyo toos ah si ay gacan uga geystaan ​​kor u qaadista fahamka. Jaamacaddu waxay culeys ku bixineysaa waxbarid saacaddii oo ah $ 204.
(5). Ku Jaamacadda Arkansas State oo bixiya in ka badan 11 barnaamijyada shahaadada bachelor-ka ee khadka tooska ah ee ku baahsan qaybaha kala duwan ayaa ka mid ah jaamacadaha adduunka oo leh khidmadaha ugu hooseeya ee barnaamijyada shahaadada bachelor-ka ee internetka.
Iyada oo wax lagu barto saacaddii amaahda ee $ 210, jaamacaddu waxay bixisaa shahaadada shahaadada bachelorka ee ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee codsada oo dhammaystira mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada internetka ee ay bixiyaan.
Haddii aad tahay arday caalami ah ama laga yaabee inaad tahay arday gudaha ah waxaad raadineysaa barnaamijyo shahaadada bachelor-ka ah oo jaban oo bixiya dabacsanaan iyo fursad aad ku hesho shahaadada khadka tooska ah markaad shaqeyneyso ama laga yaabo inaad kaqeyb gasho mashaariic kale oo shaqsiyadeed markaa liiskani waa inuu noqdaa bartaada bilawga a jaamacad online sumcad leh Raadi.
darajooyin jabanshahaadada koowaad ee jaamacaddadarajooyinka ugu jaban khadka tooska ahbachelors internetka ugu jabanshahaadada jaamacadeed ee ugu jabanshahaadooyinka waxbarashada hooseeyashahaadada jaamacadeed ee internetkadarajooyinka jaban ee khadka tooska ahdigrii internet
Previous Post:8 Shuruudaha Aasaasiga ah ee Dibadda ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:Sida wax loogu barto Kanada la'aanteed IELTS, GMAT, Hel Visa Visa iyo Shaqada Aad
Pingback: 5 Tillaabo oo lagu Helo Shahaadada Masters -ka iyada oo aan la haysan Bachelor 2021